Meksika: Nantenaina Hanova Zavatra ilay Ezaka Fandarohana Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 17:58 GMT
Tanatinà distrika fizahantany iray ao Roma ao amin'ny Tanànan'i Meksika, nipoaka ny baomba iray vita tànana mialoha ny nahatrarany ny tanjony, izay inoana ho ny foiben'ny polisy, araka ny fanamarihan'i Phillippe Saez avy ao amin'ny Defecito [es]. Vokany, maty nandritra izany ilay ahiahiana ho mpandaroka baomba, nefa dia namela fanontaniana tsy misy valiny momba ny antony sy ny tompon'andraikitra. Misy ireo manao tsoakevitra fa asan'ireo tambajotra mpikirakira zavamahadomelina izany, ho fomba iray hamaliana ireo mpitandro filaminana noho ny fiakaran'ny fanamafisana lalàna izay nikendry ireto vondrona ireto tato ho ato. Araka ny voalazan'i Gabriel Infante avy ao amin'ny Esquisy [es], nitombo ireo fisamborana sy fangiazana rongony natao, ary niafara tamin'ny fahaverezana 60 tapitrisa dolara an'ilay tambajotra.
Na dia tsy nitranga aza ilay fahavoazana goavana sy ny fahasimbàna noketrehina, mieritreritra ireo bilaogera sasany toa an'i Victor Hernandez avy ao amin'ny Sendero del Peje [es] fa “nanana fikasana MIBARIBARY hiteraka aretin-tsaina fisavorovoroana io daroka baomba io, mba hampidiran'i Marcelo Ebrard (ben'ny tanàna) miaramila ao amin'ny Tanànan'i Meksika.” Maminavina fiovàna anatin'ny governemanta sy ny fomba fiatrehan'ny fiarahamonina ny fiainana andavanandro kosa ireo bilaogera hafa. Manoratra i Sobreexpuesto [es] fa tsy maintsy mailo dia mailo ireo mponina ao amin'ny Tanànan'i Meksika:
Misy ireo hafatra maro ho an'ny fiarahamonina, fa mora andairan'ny herisetra kokoa ny fiarahamonintsika, fa mety ho valin-kafatr'ireo mpanao heloka voarindra ho an'ireo manampahefana izao, fa tsy maintsy mailo isika ary raha tsy mandray fepetra isika, dia mety hamoy ity tanànantsika ity tanteraka.
Manahy ny amin'ireo vokatr'ilay daroka baomba tsy nahomby i Emiliano Balerini avy ao amin'ny Humanos Los Derechos [es]:
Izany no mahatonga ireo baomba nipoaka tany amin'ny araben'i Chapultepec sy Monterrey ho manan-danja goavana anatin'ireny fotoan'ny savorovoro ara-politika tanteraka ireny. Azo antoka fa hampiasa izao ho fanamarinan-tena mba hiantohana fanovàna ara-pitsaràna ireo solombavambahoaka sy senatora, ary miaraka amin'izany, hamela, anivon'ireo zavatra hafa, ny fikarohana trano tsy misy didy sy famonjàna maherin'ny 40 andro mba hanadihadiana ny mombamomba ny mponina.
Kanefa, tsy manahy ny bilaogera iray noho ny tsy maha-matihanina ny fiasan'ilay mpandaroka baomba. Manoratra i Tome Chango Su Banana [es]:
Ankehitriny, toa tonga ao Meksika ny asa fampihorohoroana sy ny baomba, asehon'ilay Chapubomber malaza izay nipoaka tany amin'ny Làlamben'i Chapultepec tanatin'ny ezany hamotika ireo biraon'ny SSP (foiben'ny mpitandro filaminana). Toa tsy nety ny rindra nataony niaraka tamin'ny namany izay nitazona ilay fanapoahana. Iza no tian-dry zareo hofitahina? Mampihomehy sy voarindra ilay seho iray manontolo. Ny nampihomehy dia tsy afaka nanavotra ny tenany tamin'ilay daroka baomba nataony akory ilay vendrana. Raha ireo no karazana mpampihorohoro ananantsika aty Meksika, tsy misy atahorana.
Kanefa tsy zarain'ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny Tanànan'i Meksika izany fihetsehampo izany. Taitra kely tamin'ireo vaovao ilay bilaogera ao amin'ny La Vida es Sueño [es] ary nanao ity tsoakevitra ity:
Miaraka amin'ity, very ny fiheverana hany sisa nananako momba ny fiarovana handehanana eny an-dàlamben'ny Tanànan'i Meksika, izay nonenako 25 taona izao.